Mamwe Makambani Anoti Musika weRBZ weMari yeKunze Wave Kutatarika Zvopa Kuti Zvinhu Zvidhure
Vamwe vemabhizimisi vave kuchema chema kuti musika webhanga guru renyika, weReserve Bank of Zimbabwe, RBZ, wekutenga nekutengesa mari yekunze kana kuti Foreign Currency Auction Trading System hausi kunyatsoshanda zvakanaka sezvo vashoma vari kuwana mari uye vanenge vawana mari iyi vachinonoka kuipihwa zvekare.
Vemabhizimisi ava vanoti vave kutadza kuita basa nemazvo uye vari kukurudzira RBZ kuti idzore chirongwa chekuti vakwerete mari kunze kumabhanga akaita se African Export-Import Bank, bhanga guru richishanda sechibatiso kana kuti Letter of Credit.
Vamwe vemabhizmisi vave kuguma voenda pamukoto kunotsvaga mari apo iri kudhura.
Asi gavhuna weRBZ, Dr John Mangudya, vanotiwo musika uyu uri kushanda sezvaunotarisirwa kuita chaizvo.
Mutungamiri wesangano rinogadzira mafuta ekubikisa kana kuti Oil Expressers Association of Zimbabwe, VaBusisa Moyo, uye mukuru weOlive Industries, VaSylvester Mangani, ndevamwe vari kuti mari yavari kuwana ishoma zvekuti zviri nani kuti vabvumidzwe kukwereta kunze.
Sachigaro we CEO Africa Roundtable, VaOswell Binha, vanoti nyaya yekuti mitengo yezvinhu yange yave kukwira munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika uyu.
Mashoko aya atsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaVictor Bhoroma, avo vatiwo mari iri pamusika uyu ishoma zvikuru pane iri kudiwa nevamabhizisimisi.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, VaJaphet Moyo, vatendawo kuti musika wemari wapindwa nechando zvopa kuti vemakambani vahotsire.
Asi vati inguruve iri kukangwa nemafuta ayo sezvo vachiti vakayambira hurumende nevemabhizimisi kuti musika uyu haushande zvakanaka.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, Muzvinafundo Gift Mugano, vati RBZ haina chairi kukanganisa pamusika uyu uye uri kushanda sezvinotarisirwa.
Vatiwo vemabhizimi vanokwanisa kuwana imwe mari mukutengesa zvavanogadzira sezvo vari kubvumidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica.
Mashoko aya atsinhirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga VaGilbert Muponda, avo vatiwo musika uyu wakadzikamisa mitengo uye dhora remuZimbabwe.
Musika wemari yekunze uyu wakaparurwa muna Chikumi gore rapera.
Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaEddie Cross, vari kutenda kuti waunza kugadzikana padhora remunyika nemitengo, vari kuyambirawo kuti wave kuremerwa sezvo mari yekunze iri shoma nekuda kwehuori uye kusabhadharwa kwemitero sezvinotarisirwa.
Mashoko aya akatsinhirwa naVaKipson Gundani, pagakava rakaitwa nebepanhau reAlpha Media Holdings, vakati musiyano wemari pamusika weRBZ newepamukoto unoratidza kuti zviri kuitwa nebhanga guru ndezvefeja feja.
Asi VaMangudya vanoti vari kukwanisa kuendesa mari inodiwa pamusika wemari uyu.